Moderat-ka oo doonaya in qeyb ka mid ah Malmö laga sameeyo goob aan la galin | Somaliska
Haweeneyda mdaxda ka ah xisbiga Moderat-ka Anna Kinberg, ayaa sheegtay ineey dooneeyso in la sameey waxa loo yaqaan goob aan la geli karin (zonförbud). Hadalkan ayey sheegtay mar ay u warameeysay telefeyshinka dalka qeybtiisa wararka faafiya ee Svtnyheterna.
Talaabdan ayey Anna u aragtaa ineey tahay mid boolisku ku hakinayaan una ogolaaneyn shaqsiyaadka qaar in goobo cayiman tagaan.
“Waa inaan tusaale ahaan maandooriyaha lugu iibin karin banaanka roowdada ama xanaanada carruurta” ayey tiri Anna oo aaminsan in boolisku heeysan talaabo ku filan oo ay ku sugi karaan ammaanka dalka, sababtaasina ay Iswiidhan xilligan waajib ku tahay ineey sameeyo waxa loo yaqaano “Soonaha aan la gali karin”
Hindise la mid ah hinsidaha ay Anna Kinberg ka dhawaajisay, ayaa waxaa horey u sheegay Stefan Sinténus oo ah madaxa booliska magaaladda Malmö isagoo tusaale ka qaadanayey Denmark oo meelo ka mid ah laga dhaqan geliyey taasoo ay natiijo lugu diirsaday keentay.
“Skåne, waxaa jira xanaanadda carruuraha oo waalid ay u hanjabeen kooxaha ka ganacsada maandooriyaha islamarkaasina carruurtii loo wareejiyey xaqdiiqad ay waalidkii ka doonaan, waxaan qabaa taas cagsigeeda in meesha laga kaxeeyo kooxahaas maandooriyaha” ayey tiri Anna Kinberg oo u warameeysay SVtnyheterna, iyadoo misna sheegtay in kuwa jebiya goobaha mamnuucaha ah in ciqaab mudan la marsiiyo.
Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Anders Ygeman, ayaa sheegay in goobo cayimin la mamnuuco galiisteeda eeysan xal keeneyn islamarkaasina aan sharci cusub oo dhaqan gala laga dhigi karin. Balse haatan ay boolisku awood u leeyihiin in shaqsiyaadka qaar ku qasbi karaan ineeysan tegin goobaha aan loogu talagelin ineey tagaan. Wuxuu sidoo kale xusay in dadka jebiya xeerka u yaala dalka ay mudan yihiin in xabsi lugu arruuriyo ee aaneey arrintu aheyn in laga mamnuuco goobo cayiman.
Magaaladda Malmö oo ah caasimadda 3aad ee dalka ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal bareer ah oo ay ku lug leeyihiin kooxo dambiiileyaal ah. Dhacdadii ugu dambeeysay ee magaaladda ka dhacda ayaa bishii ina dhaaftay bartamaheeda waxaa lugu dilay wiil 16 jir, taasoo kicisay dareenkii dadka magaaladda iyo guud ahaan Iswiidhan oo dhan.